Ireo olona teratany sy ireo toeram-pitrandrahana any Kanada · Global Voices teny Malagasy
Ireo olona teratany sy ireo toeram-pitrandrahana any Kanada
Voadika ny 03 Septambra 2010 5:32 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, 繁體中文, 简体中文, Deutsch, 日本語, English
Tahitahiana ihany ny tsy hampiasa teny mahery hilazàna fa ny vondrom-piarahamonin'ireo teratany any Amerika Avaratra dia tsy nahazo tombon-tsoa sahaza azy avy amin'ny fandrosoana ara-indostrialin'ny kontinanta Amerikana Tavaratra. Ny Foibem-pikarohana momba ny fanatontoloana dia nanao izao fanambaràna izao [fr]:
l’espérance de vie est moindre, les maladies sont plus répandues, les problèmes humains, depuis la violence familiale jusqu’à l’alcoolisme, sont également plus répandus. Moins de jeunes achèvent leurs études secondaires, une minorité d’entre eux entrent au collège et à l’université
Fohy andro iainana, mihamiparitaka ireo aretina, mihabetsaka ihany koa ireo olan'ny olombelona, manomboka hatreo dia mitombo koa ny herisetra an-tokatrano hatramin'ny fisotroan-toaka. Mihavitsy ireo tanora no mahavita fianarana eny amin'ny lisea ary vitsy ireo mianatra eny amin'ny kolejy sy ny anjerimanontolo.
Dia nanohana ny hevitro aho tao amin'ny lahatsoratra blaogy [fr] iray fa tokony ho andraikitr'i Amerika Avaratra ny fampandrosoana iraisam-pirenena rehefa mikasika ny olan'ireo olona vazimba teratany izany. Ireo fifandraisana misy eo amin'ireo governemanta sasany (Canada sy Quebec ohatra) sy ireo olona vazimba teratany ao amin-dry zareo, dia manam-pitoviana betsaka amin'ny governemantan'ireo tany mandroso sy ireo mponina malemy indrindra maneran-tany. Asa mora lavitra ny manao lamin'asa arahan-tanjona tsara ary ny manasonia fifanekena iraisam-pirenena rehefa tsy misy fiantraikany mivantana amintsika izany. Na izany aza, rehefa momba ireo vazimba teratany sy ny fahantràna (ireo tompon-tany any Kanada dia mitàna ny laharana faha-63 ao amin'ny Lisitry ny Fandrosoan'ny Olombelona, raha faha-4 kosa i Kanada iray manontolo), lasa olàna mafàna ny raharaha, noho isika mifampizara tany an-teoria, ary koa harena izay mety hanampy ireo vazimba teratany hiakatra zana-tohatra vitsivitsy eo amin'ny Lisitry ny Fandrosoan'ny Olombelona.
Fitrandrahana saribao any Kanada, sarin'i Vicky tamin'ny alalan'ny ClintJCL ao amin'ny Flickr- CC license share alike-NC 2.0
Noho izany ny vondrom-piarahamonina Innu, vazimba teratany mponina ao Labrador any Canada dia nanakana ny fidirana any amin'ireo toerana fitrandrahana vy any Labrador nanomboka tamin'ny 11 Jona. Araka ny Mining Watch, ny vondrom-piarahamonina Innu dia:
miantso ny Governemantan'i Québec hanambara ny fampiatoana avy hatrany ny fitiliana “uranium” sy ny fitrandrahana manerana an'i Québec (…) Ny Lehiben'ny Innu any Uashat mak Mani-Utenam dia nanamarika fa maro ireo tetikasa fitiliana “uranium” no hita eny amin'ireo tanindrazan-dry zareo ary ireo tetikasa rehetra ireo, tahaka ireo fanomezan-dàlana hafa rehetra nataon'ny Governemantan'i Québec, dia mila ny fanekena malalaka, mialoha ary fanazavàna avy amin'ny Innu.
Ireo mpisolo tena ny governemanta federaly, ny governemantan'i Quebec, ny governemantan'i Terre-Neuve sy Labrador ary ireo mpitarika tera-tany avy ao Schefferville sy Sept-Îles Maliotenam dia nihaona mba hiadihevitra momba ireo tombon-tsoa ara-toekarena mety ho azo avy amin'ny tetikasa. Nefa mbola misy fifanarahana iray tsy maintsy atao: ny governemantan'i Dany Williams any Terre-Neuve dia te-hahazo 80 isan-jaton'ireo tombon-tsoa mifandraika amin'ireo asa fitiliana ao amin'ireo toeram-pitrandrahana vao nisokatra tsy ela, raha nanolotra vola 700 000$ ho an'ireo Innu any Schefferville kosa ireo Toeram-pitrandrahana vy any Labrador sy ny Renivohitry New Millenium mba handresen-dahatra azy ireo hanala ireo sakana.
Ity olana ity dia manasongadina fa raha ny marina dia tsy voahaja ireo lalàna sasany ao amin'ny Fanambaràna ireo zon'ireo olona vazimba teratany tohanan'ny governemantan'i Quebec. Ohatra mazava amin'ity tsy fifanarahana ity no asongadin'ny mpitoraka blaogy Armand McKenzie izay mitanisa ny andininy faha-32 ao amin'ilay Fanambaràna, izay milaza fa:
Ny Fitondràna dia tokony hanomana fitaovana mahomby ho an'ny fanarenana marina sy rariny ho an'ireo asa rehetra, sy fepetra mifandraika amin'izany noho ny voka-dratsiny ara-tontolo iainana, toekarena, sosialy, kolotsaina na ara-panahy.
Sady fanampin'izany, araka ny voalazan'i Melissa Filion, miblaogy ao amin'ny Greenpeace:
Tsy nisy na inona na inona nataon'ny governemantan'i Quebec, momba ny Plan Nord, mba hamahana ny olana mifandraika amin'ireo zo sy anarana entin'ny Tanindrazana Voalohany. (…) Hatramin'izao, mazava fa liana amin'ireo karazana tetikasa fitiliana sy fitrandrahana ny governemanta, na tohodrano famokarana herin'aratra, asa fitrandrahana ala maromaro na fitrandrahana solika vaovao, entona na vato… Ireo asa ara-indostrialy goavana ihany, izay ihany ! (…) Ahoana no fomba eritreretin'ny governemantan'i Quebec hifandraisana amin'ireo vondrom-piarahamonin'ny Tanindrazana Voalohany izay maniry ny fifampiresahana eo amin'ny samy firenena?